Cindezela | Julayi 2021
Ukuphila Kahle Inkampani, Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Izindaba Umphakathi, Inkampani Umphakathi, Ukuphila Kahle Inkampani, Imfundo Yezempilo Cindezela Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Inkampani Izidakamizwa Vs. Umngani Umphakathi Inkampani, The Checkout Izindaba
Bika: Yini ongayilindela kule nkathi yokungezwani komzimba namathiphu wokuthi ungazivikela kanjani kangcono
URamzi Yacoub, Pharm.D., Uphendula imibuzo mayelana nenkathi yokungezwani komzimba no-2021, ethatha ama-antihistamine ngaphambi komuthi wokugoma we-COVID-19, nokuthi imuphi umuthi wokungezwani komzimba ohamba phambili.
Umbiko: Inkathi yomkhuhlane icindezelwe phakathi kwesifo se-COVID-19
Isikhathi somkhuhlane we-2020 besilokhu siphansi ngokungavamile phakathi kwesifo se-coronavirus. Qhathanisa umsebenzi womkhuhlane walo nyaka nemininingwane kadokotela ehlobene nomkhuhlane nonyaka odlule.
Umbiko: Idatha ye-SingleCare ikhombisa ukwenyuka kuka-Agasti ekufunweni kokugomela umkhuhlane
Imishanguzo yomkhuhlane isivele idingeka kakhulu. Ukudutshulwa komkhuhlane we-2020 akuyona indlela esebenzayo yokuvikela i-coronavirus, kepha kusabalulekile. Nakhu ukuthi kungani.
UMartin Sheen Stars eMkhankasweni Omusha Wokukhangisa Kazwelonke Wokukhombisa Izigidi Indlela Yokonga Imali Kuzidakamizwa Ezisetshenziswa Ngudokotela
I-SingleCare ijabule kakhulu ukumemezela ukwethulwa komkhankaso omusha wezokukhangisa wethelevishini nowedijithali oqukethe umlingisi wodumo uMartin Sheen. Lo mkhankaso ukhumbuza ababukeli ukuthi bangonga imali enkulu emithini yokwelashwa ngeSingleCare, okuyikhadi lesaphulelo samahhala ekhemisi elitholakala kuwo wonke umuntu, kungakhathalekile isimo somshuwalense. Isikhangiso
Umbiko: Ukukhuphuka nokuwa kokuthandwa kwezidakamizwa kadokotela ngesikhathi sobhadane lwe-COVID-19
Sihlaziye imininingwane ye-SingleCare yezindlela ezintathu zokwelashwa kwe-coronavirus-hydroxychloroquine, albuterol, ne-famotidine-ukuze sifunde ukuthi ubhadane lukuthinta kanjani ukufunwa kwe-Rx.
Bika: Umthelela Wabathengi Wokunyuka Kwamanani Ezidakamizwa Ngo-2021
Izintengo zezidakamizwa zikhula ngokushesha kunezinga lokwehla kwamandla emali. AbakwaRxSense bahlaziye imishanguzo engama-24,000 ukukhomba ukuthambekela kokunyuka kwamanani ezemithi kulo nyaka. Nakhu esikutholile.
Abalingani beSingleCare Nosomahlaya nomlingisi uJohn Leguizamo woMkhankaso Wokukhangisa Wolimi LweSpanish Lokuqala
Ukwethulwa Okusha Kokuvezwa Kwesikhangiso Sewebhusayithi yeSingleCare yaseSpain Yokusiza Umphakathi WaseLatino Ukonga Imali Kumuthi Wezidakamizwa I-SingleCare, insizakalo yokulondolozwa kwamahhala kadokotela, namuhla umemezele ukuthi ibambisene nosomahlaya nomlingisi uJohn Leguizamo emkhankasweni wokuqala walo mkhiqizo ngeSpanish. Ngokubambisana nomkhankaso omusha, iSingleCare yethule inguqulo yolimi lweSpanishi ye
kungakanani ukuvakashela udokotela ngaphandle komshwalense
wenza ekuseni ngemuva kwamaphilisi ngemuva kwezinsuku ezimbili
yini ukushaya kwenhliziyo yokuphumula okubi
ukuthi ungakudlulisa kanjani ukuhlolwa kwezidakamizwa zemethamphetamemes drug
Kuyoze kube nini ubenadryl ekwenza wozele